श्रीमान् श्रीमतीको झगडाले भ्रूणलाई पार्ने असर र समाधानका उपाय ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»श्रीमान् श्रीमतीको झगडाले भ्रूणलाई पार्ने असर र समाधानका उपाय !
श्रीमान् श्रीमतीको झगडाले भ्रूणलाई पार्ने असर र समाधानका उपाय !
By लाल्टिन डट कम March 28, 2022 Updated: March 29, 2022 No Comments2 Mins Read
पति-पत्निबीच भनाभन र झगडा त सधैँजसो हुन्छ नै! यदि तपाईं आमाबाबु बन्न लाग्नुभएको छ भने यस्तो झगडाले गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्न पनि सक्छ । विज्ञहरुले गर्भवती महिलालाई जुनसुकै अवस्थामा पनि आनन्दित रहने सल्लाह दिन्छन् ।
यदि गर्भवती महिला कुनै तनावमा हुन्छिन् भने यसले उनको मुटुको धड्कन बढाउँछ । रक्तचाप बढ्छ र गर्भमा रहेको बच्चामा अक्सिजन आपूर्ति कम हुन सक्छ । यसकारण, श्रीमान-श्रीमतीबीचको झगडाले गर्भमा रहेको बच्चालाई धेरै असर पार्ने कुरा डाक्टरहरु बताउँछन् ।
जोडीको झगडाले भ्रूणलाई पार्ने असरहरु यस प्रकार छन् :
बच्चाको मानसिक विकासमा बाधा
गर्भावस्थामा अत्यधिक रुनु वा रिसाउनु शिशुको स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । यसले गर्भमा रहेको बच्चाको मानसिक विकासमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ । बच्चाको सोच्ने क्षमतालाई असर पार्छ ।
भ्रूणका लागि खतरा
झगडाका क्रममा यदि शारीरिक यातनासम्मको घटना भयो भने चोटपटकका कारण गर्भमा रहेको शिशुको ज्यान समेत जान सक्छ । रक्तस्रावलाई गर्भपातको लक्षण मानिन्छ ।
बच्चाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमि
यदि गर्भावस्थामा दम्पतीबीच झगडा भए बच्चाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा दबाब पर्न सक्छ र भविष्यमा बच्चा रोगको शिकार हुन सक्छ । आमाको बढ्दो तनावले बच्चामा पनि नराम्रो असर गर्छ ।
गर्भावस्थामा दम्पतीबीचको झगडाबाट बच्ने तरिका
गर्भावस्थामा महिलामा ‘मुड स्विंग’ हुने समस्या हुन्छ जसले गर्दा उनीहरु अनावश्यक कुरामा झिंझिने-मिच्छिने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा श्रीमानले निकै नै धैर्यताको साथ श्रीमतीलाई सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केहि उपाय अपनाएर हामीले अनावश्यक झगडालाई टार्न सक्छौँ । पहिलो कुरा हामीले पार्टनरसँग गर्भमा रहेको बच्चाको गतिविधिबारे छलफल गर्नपर्छ र उनीहरूको विचार जान्नुपर्छ । साथै, हामीले पेटमा रहेको बच्चाको लागि योजना बनाउन पनि सक्छौँ । यस्तो अवस्थामा पत्निले पतिको साथ धेरै खोज्ने गर्छन् । त्यहि भएर एकअर्काको लागि समय निकाल्नुपर्छ । यदि दम्पती दुवै जना काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले दिनमा केही समय सँगै बिताउनुपर्छ । सँगै घुम्न जाने र ध्यान, योग, व्यायामलाई समय दिने गर्नुपर्छ ताकि दिमाग शान्त रहोस् । अन्त्यमा, डाक्टरकहाँ जाने र परामर्श लिने काम गर्नुपर्छ जसले गर्दा दुवैले शारीरिक परिवर्तनहरु बुझ्न र सम्हाल्न सकिन्छ।
श्रीमान् श्रीमतीको झगडाले भूर्णलाई पार्ने असर र समाधानका उपाय !